VaZuma Voitwazve Muyananisi muIvoary Coast
Sangano reAfrican Union rasarudza chikwata chevatungamiri vashanu venyika dzemuAfrica vachabatsirana nesangano reECOWAS mukugadzirisa gakava riri muIvory Coast.
Chikwata ichi chakadomwa kumusangano weAfrican Union, uyo wapera muAddis Ababa, kuEthiopia.
Mutungamiri weSouth Africa, uye vari muyananisi mugakava remuZimbabwe, VaJacob Zuma, mumwe wevatungamiri vanosanganisira mutungamiri weTanzania, VaJakaya Kikwete, mutungamiri weMauritania, VaMohamed Ould Abdel Aziz, mutungamiri weChad pamwe nemutungamiri weBurkina Faso.
Mutungamiri weNigeria, VaGoodluck Jonathan, varimowo muchikwata ichi sezvo vari sachigaro wesangano reECOWAS. Chikwata ichi chichazeya gakava riri muIvory Coast, pakati paVaLaurent Gbagbo naVaAlassane Ouattara.
Kusarudzwa kwaVaZuma kuve muchikwata ichi kuri kushorwa nevamwe vachiti izvi zvichaita kuti VaZuma vasawane nguva yakakwana yekutarisa dambudziko riri muZimbabwe.
SADC yakadoma VaZuma kuti vave mutongi gava pagakava riri pakati pemutungamiri weZanu PF, VaRobert Mugabe, nemutungamiri weMDC huru, VaMorgan Tsvangirai.
VaTsvangirai vanoti VaMugabe vari kuita humbimbindoga pakutonga, izvo zvanoti zvinotyora chibvumirano cheGlobal Political Agreement, icho chakashandiswa mukuumba hurumende yemubatanidzwa.
Asi VaMugabe vanoti zvavari kuita muhurumende zvinotsigirwa nebumbiro remitemo yenyika. Asi chikamu chebumbiro iri chinoti VaMugabe vanofanirwa kugara pasi nevamwe vavo muhurumende kana podomwa vanhu vanofanirwa kutora zvinzvimbo zvepamusoro muhurumende.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition, VaPhilip Pasirayi, avo vanga vari kumusangano weAfrican Union, vanoti havaoni VaZuma vachizokwanisa kugutsa mapoka maviri avachange vachimirira anoti reSADC pamwe neAfrican Union mukuita basa rekuyananisa.